BBC Somali - Warar - Turkish Airline oo u duushay Somalia
Turkish Airline oo u duushay Somalia
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 6 Maarso, 2012, 12:52 GMT 15:52 SGA
Diyaarad ay leedahay shirkada Turkish Airlines ayaa waxaa ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Turkish Airlines ayaa ka degtay Muqdisho
Shirkada diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa waxaa ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Waa duulimaadkii ugu horeeyay ee caalami ah ee Soomaaliya ka daga muddo labaatan sano ah.
Diyaaradda waxaa soo dhaweeyay wafdi badan oo ka socday DKMG ah, sarakiil Qaramada Midoobay iyo safiirro.
Duulimadka ayaa waxaa uu daba socdaa booqasho uu Muqdisho ku tegay sanadkii la soo dhaafay Ra'isul Wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaas oo sheegy inuu ka horjeedo fekradda oranaysa Muqdisho waa meel aan la tegi karin.
Shirkadda diyaaradaha Turkiga ayaa waxaa ay sheegaysaa in ay labo jeer u kala duuli doonto Muqdishu iyo Ankara iyada oo sii mareysa magaalada Khartoum ee dalka Sudan.
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday miisaaniyadda dawladda
Suuriya: Dowladda oo weerartay Quseyr
Guurka Sacuudiga iyo qaxootiga Suuriya05:10
Xasan Sheekh: "Siyaasadeydu waa Somalia oo mid ah"04:31
Axmed Sabriye wuxuu la 70 jirsaday SYL06:21
Somaliland: Xuska 18ka May04:51
Sideed u aragtaa xaaladda Kismaayo?54:01
Faysal: "kulanku waxa uu ahaa salaan keliya"04:02
Abiib Diiriye oo eedeeyay Faysal Cali Waraabe03:55
Halkay maraysaa siyaasada Soomaaliya03:51
Aarmaanta oo u warramaya BBC Somali02:11
Maxay Soomaaliya muhiim u tahay?02:21
Maxay Soomaaliya muhiim u tahay?02:23
Caleemo saarka Madaxweyne Uhuru02:21
Muqdisho oo habeenkii iftiimeysa01:46
Waraysi Dr Maryan Qaasim06:23
Bandhigga De Gabay ee Cardiff03:40
Sawirro shirka London(none)
Sawirro: Soomaalida ku ganacsatada jidadka Cape Town(none)
Sawirro: Noloshii Hugo Chavez(none)
Sawirro: Maalinta Codbixinta(none)
Sawirro magaalada Djibouti(none)
Soomaalida ku ganacsatada tuullooyinka Koonfur Africa(none)
Sawirro ku saabsan Kenya(none)
Sawirro doorashada Djibouti(none)